ယူနိုကျတကျမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ အသကျ (၁၈)နှဈသားဒီယာလိုရဲ့ ခွစှေမျးကို ဒီနေ့ ယူ ၂၃အသငျးနဲ့အတူ တှရေ့တော့မယျ…. – Premier League Special
ယူနိုကျတကျမှာ နာမညျကွီးနတေဲ့ အသကျ (၁၈)နှဈသားဒီယာလိုရဲ့ ခွစှေမျးကို ဒီနေ့ ယူ ၂၃အသငျးနဲ့အတူ တှရေ့တော့မယျ….
မနျယူအသငျးနညျးပွ ဆိုးလျရှားက တောငျပံကစားသမား အာမတျဒီယာလိုဟာ ဒီနညေ့ (၇း၃၀)မှာ လီဗာပူးယူ-၂၃နဲ့ ကစားရမယျ့ မနျယူ ယူ-၂၃ အသငျးမှာပါဝငျတော့မယျလို့ အတညျပွုလိုကျပါတယျ။
အတ်တလန်တာကနပွေောငျးလာတဲ့ ဒီယာလိုဟာ မနျယူအသငျးအင်ျကြီကိုဝတျပွီး ပထမဆုံးကစားရတော့မှာဖွဈလို့ သိပျမကွာခငျမှာ မနျယူစီနီယာအသငျးကွီးနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂျမှာပှဲထှကျခှငျ့ ရဖို့ရှိနတေယျလို့လညျး ခနျ့မှနျးကွပါတယျ။
ဒီပှဲဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ -၂ ပွိုငျပှဲအဖွဈယှဉျပွိုငျကွမယျ့ပှဲဖွဈပွီး လူငယျကစားသမားတှအေတှကျ စီနီယာအသငျးဆီ တကျလှမျးခှငျ့ရဖို့ ခွစှေမျးပွနိုငျတဲ့အခှငျ့အရေးကို ရရှိကွတဲ့ပွိုငျပှဲအဖွဈလညျး သတျမှတျထားကွပါတယျ။
အသကျ ၁၈ နှဈသာရှိသေးတဲ့ ဒီယာလိုဟာ အတ်တလန်တာကနကေနဦးပွောငျးရှကွေ့ေးပေါငျ ၁၈.၇ သနျးနဲ့ပွောငျးလာတာဖွဈပွီး သူ့တနျကွေးကပေါငျ ၃၇ သနျးအထိရှိလာမယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
အိုငျဗရီကို့ဈလူငယျဖွဈတဲ့ ဒီယာလိုဟာ လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးမှာအားရစရာ ခွစှေမျးမြိုးပွနိုငျခဲ့လို့ သူ့ကိုယူ ၂၃ အသငျးမှာ ပှဲဦးထှကျကစားစဖေို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတာလို့လညျး နညျးပွဆိုးလျရှားကပွောပါတယျ။ ဆိုးလျရှားဟာ ယူ-၂၃ ပှဲတှကေိုတိုကျရိုကျ ကွီးကွပျခွငျးမရှိပမေယျ့ သူ့စီမံခနျ့ခှဲခှငျ့လကျအောကျမှာရှိနပွေီး လိုအပျတာတှကေိုညှနျကွားပိုငျခှငျ့ ရှိထားပါတယျ။
ဆိုးလျရှားက” ဒီယာလိုဟာ လီဗာပူး ယူ-၂၃ နဲ့ကစားရမယျ့ပှဲမှာ ပါဝငျမှာပါ။ သူဟာလကေ့ငျြ့ရေးကှငျးမှာ စှမျးဆောငျရညျကောငျးတှပွေသထားနိုငျလို့ ပှဲကစားခြိနျရဖို့နဲ့ အမြားရှမှေ့ာ အစှမျးပွနိုငျမယျ့အခှငျ့အရေးရဖို့ အဆငျသငျ့ရှိနပွေီလို့ ကြှနျတျောယုံကွညျပါတယျ။
ဒီလိဂျမှာ သူ့ခွစှေမျးကိုကွညျ့ရဖို့ ကြှနျတျောအမြားကွီး စိတျလှုပျရှားနပေါတယျ။ လီဗာပူးနဲ့ပှဲမှာ မနျယူနဲ့အတူပွိုငျဘကျကို သူရငျဆိုငျပါတော့မယျ။ အင်ျဂလိပျဘောလုံးလောက ကနကွေိုဆိုပါတယျ ဒီယာလိုရေ” လို့ပွောသှားပါတယျ။ ဒီနှဈသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ စကျတငျဘာလကလညျးတှဆေုံ့ခဲ့ဖူးပွီး လီဗာပူးက ( ၅-၃ ) ရလာဒျနဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့ပါတယျ။ အဲ့သညျ့ပှဲစဉျဟာလညျး ပွိုငျဆိုငျမှု ပွငျးထနျခဲ့ကာ နှဈသငျးစလုံးကစား သမား ( ၁ ) ဦးစီ အထုတျခံခဲ့ရပါတယျ။
ဒီယာလိုဟာ လငျြမွနျပွီး ဘောလုံးအရညျအသှေးပွညျ့ဝကာ နရောလှတျရှာတာလညျး ကောငျးမှနျလို့ မနျယူ စီနီယာအသငျးကွီးမှာ လိုအပျခကျြရှိနတေဲ့ညာတောငျပံနရော ကိုအမွနျဆုံးဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျမယျလို့လညျး ဆိုးလျရှားက ယုံကွညျနပေါတယျ။
မနျယူအသငျးရဲ့ညာတောငျပံနရောမှာ ဂရငျးဝုဒျ၊ ရကျရျှဖို့ဒျ၊ ဒနျနီရယျဂြိမျးဈ၊ မာတာနဲ့ ပေါ့ဂျဘာ တို့ကစားခဲ့ကွပမေယျ့ တောငျပံသမားစဈစဈ ကိုလိုအပျနဆေဲဖွဈပါတယျ။
ယူနိုက်တက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အသက် (၁၈)နှစ်သားဒီယာလိုရဲ့ ခြေစွမ်းကို ဒီနေ့ ယူ ၂၃အသင်းနဲ့အတူ တွေ့ရတော့မယ်….
မန်ယူအသင်းနည်းပြ ဆိုးလ်ရှားက တောင်ပံကစားသမား အာမတ်ဒီယာလိုဟာ ဒီနေ့ည (၇း၃၀) မှာ လီဗာပူးယူ-၂၃နဲ့ ကစားရမယ့် မန်ယူ ယူ-၂၃ အသင်းမှာပါဝင်တော့မယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ အတ္တလန္တာကနေပြောင်းလာတဲ့ ဒီယာလိုဟာ မန်ယူအသင်းအင်္ကျီကိုဝတ်ပြီး ပထမဆုံးကစားရတော့မှာဖြစ်လို့ သိပ်မကြာခင်မှာ မန်ယူစီနီယာအသင်းကြီးနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာပွဲထွက်ခွင့် ရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်း ခန့်မှန်းကြပါတယ်။ ဒီပွဲဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် -၂ ပြိုင်ပွဲအဖြစ်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့်ပွဲဖြစ်ပြီး လူငယ်ကစားသမားတွေအတွက် စီနီယာအသင်းဆီ တက်လှမ်းခွင့်ရဖို့ ခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကို ရရှိကြတဲ့ပြိုင်ပွဲအဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
အသက် ၁၈ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ဒီယာလိုဟာ အတ္တလန္တာကနေကနဦးပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင် ၁၈.၇ သန်းနဲ့ပြောင်းလာတာဖြစ်ပြီး သူ့တန်ကြေးကပေါင် ၃၇ သန်းအထိရှိလာမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ အိုင်ဗရီကို့စ်လူငယ်ဖြစ်တဲ့ ဒီယာလိုဟာ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာအားရစရာ ခြေစွမ်းမျိုးပြနိုင်ခဲ့လို့ သူ့ကိုယူ ၂၃ အသင်းမှာ ပွဲဦးထွက်ကစားစေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့လည်း နည်းပြဆိုးလ်ရှားကပြောပါတယ်။ ဆိုးလ်ရှားဟာ ယူ-၂၃ ပွဲတွေကိုတိုက်ရိုက် ကြီးကြပ်ခြင်းမရှိပေမယ့် သူ့စီမံခန့်ခွဲခွင့်လက်အောက်မှာရှိနေပြီး လိုအပ်တာတွေကိုညွှန်ကြားပိုင်ခွင့် ရှိထားပါတယ်။
ဆိုးလ်ရှားက” ဒီယာလိုဟာ လီဗာပူး ယူ-၂၃ နဲ့ကစားရမယ့်ပွဲမှာ ပါဝင်မှာပါ။ သူဟာလေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေပြသထားနိုင်လို့ ပွဲကစားချိန်ရဖို့နဲ့ အများရှေ့မှာ အစွမ်းပြနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးရဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေပြီလို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီလိဂ်မှာ သူ့ခြေစွမ်းကိုကြည့်ရဖို့ ကျွန်တော်အများကြီး စိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ လီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာ မန်ယူနဲ့အတူပြိုင်ဘက်ကို သူရင်ဆိုင်ပါတော့မယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောက ကနေကြိုဆိုပါတယ် ဒီယာလိုရေ” လို့ပြောသွားပါတယ်။ ဒီနှစ်သင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလကလည်းတွေ့ဆုံခဲ့ဖူးပြီး လီဗာပူးက ( ၅-၃ ) ရလာဒ်နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့သည့်ပွဲစဉ်ဟာလည်း ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်ခဲ့ကာ နှစ်သင်းစလုံးကစား သမား ( ၁ ) ဦးစီ အထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒီယာလိုဟာ လျင်မြန်ပြီး ဘောလုံးအရည်အသွေးပြည့်ဝကာ နေရာလွတ်ရှာတာလည်း ကောင်းမွန်လို့ မန်ယူ စီနီယာအသင်းကြီးမှာ လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့ညာတောင်ပံနေရာ ကိုအမြန်ဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်လို့လည်း ဆိုးလ်ရှားက ယုံကြည်နေပါတယ်။ မန်ယူအသင်းရဲ့ညာတောင်ပံနေရာမှာ ဂရင်းဝုဒ်၊ ရက်ရ်ှဖို့ဒ်၊ ဒန်နီရယ်ဂျိမ်းစ်၊ မာတာနဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာ တို့ကစားခဲ့ကြပေမယ့် တောင်ပံသမားစစ်စစ် ကိုလိုအပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတဈခါလညျး မိုကျကယျအိုဝငျက (၁-၂) ပဲတဲ့….
ရကျဖို့ဒျက ဆိုးရှားပေးတဲ့ အိမျစာ ဘယျလောကျလုပျထားလဲ ဆိုတာ ဒီညမှာ တှရေ့မယျ…